Maitiro ekuchinja maitiro eakaviri matepi chiratidzo pane iyo AirPods | Ndinobva mac
Maitiro ekuchinja maviri pombi yekuita chiito pane AirPods
Mazuva anoenda uye ndichiri kufunga izvozvo AirPods Ivo vanga vari kubudirira pachikamu cheApple kunyangwe vanhu vazhinji vachitaura neimwe nzira. Ndakaedza mamwe mahedhifoni, mamwe akadhura mamwe anodhura uye ndasvika pamhedziso yekuti mhando iyo Apple yaisa mune ichi chidiki chishamiso cheinjiniya zvinogamuchirwa kwazvo kana zvisiri zvepamusoro.
Chero zvaunofunga, ndicharamba ndichigovana newe zvakanakira vadiki ava nekuti sezvo ndinavo vanondiperekedza kwese kwese uye ndinogara ndichitakura Mudziyo bhokisi muhomwe diki yepamusoro yehomwe yemukomana, inokwana zvakakwana.
Chimwe chezvinhu chandinonyanya kuda pamusoro peaya mahedhifoni kukura kwavo uye pfungwa. Isu tine bhokisi remidziyo risina kukura kupfuura dental floss bhokisi uye kuti isu tinogona kugara tichitakura naro tisinganzwe kuti rinotiremera. Uye zvakare, kuzvionera kwakazara uye ndekwekuti kunoenderana nemaawa akatsanangurwa naApple. Kunze kwekubatana kune yangu iPhone, Mac kana Apple Watch inguva pfupi yekutenda kune iyo W1 chip.
Asi hei, isu takatotaura pane dzimwe nguva nezveese maficha ane aya mahedhifoni. Nhasi tinoda kukudzidzisa iwe kuti uchinje maitiro ekushanda kwayo uye, kunyangwe ndaverenga zvinyorwa zvakawanda zvinotsoropodza chokwadi chekuti Apple yaita chiratidzo chega chepombi mbiri pamahedhifoni kukumbira Siri, hapana kana mumwe wavo anotaura nezve izvo zvinogona kuchinjwa uye kuitwa patinobata kaviri, kumbomira uye kutamba kunoitika pachinzvimbo chekudaidza Siri kana kuve nechiratidzo chimwechete chakaremara.
Kuti ugone kubata zvatakakuudza iwe zvaunofanirwa kuita kupinza zvido zveBluetooth zveAirPods. Ichi chiito chinogona kuitwa kubva Zvirongwa> Bluetooth> AirPods <i pane iyo iPhone, asi kubva kuMac unogona zvakare kupinda Sarudzo Dzesarudzo> Bluetooth> AirPods> Sarudzo.
Sezvauri kuona mune iyo skrini, iwe unogona kuita shanduko nhatu mukushanda kwemahedhifoni. Unogona kuvaudza kuti mamaikorofoni eiri mahedhifoni anoshanda zvakasiyana, kuti chete kurudyi kana chete kuruboshwe ndiko kunoshanda. Kune rimwe divi, iwe unogona kumisikidza iyo mbiri pombi pavari kuitira kuti Siri ikumbirwe, kuti iite iyo Mira uye Tamba kana kuidzima Uye pakupedzisira iwe unogona kudzima nzeve kuti ionekwe uye nekudaro kana iwe ukabvisa imwe yeAirPods, iyo yekutamba haimire. Pasina kupokana, ndinoziva kuti kana uine yako AirPods uchaenda kunetseka neiyi nyowani yekuteerera pfungwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Maitiro ekuchinja maviri pombi yekuita chiito pane AirPods
Ini handikwikwidze kuti mashandiro ayo akakwana, asi dhizaini yayo haibvumirwe kumatomu enzeve dzakawanda dzisingakwanise kudzichengeta dziripo.
Pindura kuna rotelo
Maitiro ekutora skrini pasina kuratidza iwo mumvuri maitiro
Mozilla uye Chrome inozivisa hondo pamawebhusaiti asina kuchengetedzeka